Austria oo u beddalaysa gurigii uu ku dhashay Hitler xarun booliis | Radio Himilo
Home / Deegaan / Austria oo u beddalaysa gurigii uu ku dhashay Hitler xarun booliis
Posted by: Mahad Mohamed November 20, 2019
Himilo- Xukuumadda Austria ayaa go’aansatay in guriga uu ku dhashay Adolf Hitler loo beddalo xarun booliis kaddib muddo dhowr sanno ah oo ay taagneyd dood xagga sharciga ah.
Wasaaradda arrimaha gudaha Austria ayaa sheegtay in guriga laga dhigi doono xarun booliis si looga hortago in uu u noqdo goob ay tagaan kooxaha Naasiyiinta.
Adolf Hitler, hoggaamiyihii Naasiyiinta, waxa uu ku dhashay dhismo ku yaalla Braunau oo katirsan dalka Austria kuna dhaw xudduuda uu dalkaaasi la wadaago Jarmalka.
Labo sanno kaddib, waxay Austria la wareegtay guriga oo ay muddo laheyd Gerlinde Pommer oo ehelkeeda degganaayeen kahor inta uusan ku dhalan Hitler. Ms Gerlinde ayaa ku doonaysa gurigaasi qiimo lacageed gaaraya 1.7 Milyan oo doolar, waxayna u muuqataa in dowladda dooneyso inay magdhaw siiso qoyska.
Sanadihii danbe, Saraakiisha dowladda Austria ayaa ka walaacsanaa in guriga uu ku dhashay Hitler uu noqdo xarun weyn oo kulmisa kooxaha aaminsan aragtida Naasiyiinta, waxayna dowladda qaaday tallaabooyin looga hortagayo arrintaasi si loo ilaaliyo danta guud.
Previous: Wax ka ogow dhalashada dadka ugu carrada badan caalamka
Next: Achraf Hakimi oo qeyb ka ah qorshayaasha kooxda Real Madrid